Yekutengesa fanera: Chii icho uye nei ichi | ECommerce nhau
Yekutengesa fanera: Chii icho uye ndeyei?
El fanera rekutengesa Iyo inozivikanwa zvakare seye fanera yekutengesa, uye chishandiso chakakosha kwazvo paCommerce nhasi, asi havazi vazhinji vanoipa kukosha kwakakodzera.
Naizvozvo, pazasi isu tinoda kukubatsira iwe kuti uzive kuti chii fanera yekutengesa, ndeyei uye kuti ungazviita sei kune eCommerce yako kuti ugadzire, sekutaurwa kwezita, kuwanda kutengesa mubhizinesi rako. Iwe unoda kuziva kuti ungazviita sei?
1 Chii chinonzi fannel yekutengesa
2 Ndeipi funel yekutengesa ye
3 Zvikamu zveiyo fanera yekutengesa
4 Bhenefiti yeiyo yekutengesa fanera mune rako bhizinesi
5 Maitiro ekugadzira fanera yekutengesa kune yako eCommerce
5.1 Muchikamu chekukwezva
5.2 Muchikamu chekutsvaga
5.4 Uye mune zvimwe zvikamu?
Chii chinonzi fannel yekutengesa
Mutengesi wekutengesa, inonziwo fanera yekutengesa, Chaizvoizvo nhevedzano yematanho anoshandiswa nemushandisi kubva paanosvika pawebhusaiti yako kusvikira vave mutengi.
Ngatitorei muenzaniso. Fungidzira kuti uri kutsvaga bhuku. Iwe unoiisa muinjini yekutsvaga uye iwe unowana akawanda mawebhusaiti anayo. Saka iwe tinya pane imwe. Iwe uchaverenga chirevo uye, kana uchichifarira, uye mutengo wacho wakarurama, unozozvipa kuti utenge.
Iyo yatove mungoro yako chaiyo, asi haina kutengwa, asi danho rinotevera ndere kugadzirisa hurongwa, uko, mune iyi kesi, vanotikumbira dhata remunhu kutumira chigadzirwa uye kutipawo iwo wekupedzisira mutengo nekutumira mari. Pano zvinogona kuitika kuti iwe enda kumberi kana kuti iwe ufunge kuti zvinodhura zvakanyanya woisiya. Chete kana odha yacho yapera, ndiko kuti, yatengwa chaizvo, ndipo panonzi fanera rekutengesa rakwana, nekuti mushandisi apfuura nhanho dzinozvinyora.
Basa rako ndere kuperekedza ava vashandisi kuitira kuti maitiro amhanye nekukurumidza uye nyore sezvinobvira.
Ndeipi funel yekutengesa ye
Zvino zvave kujekerwa kwauri kuti chii fanera yekutengesa, inguva yekuziva kuti inobatsira sei. Uye ndeyekuti vazhinji vakasara vega nenyaya yekuti inoshanda kukwezva vashandisi uye kuvashandura kuva vatengi. Asi zvirokwazvo haina kudaro; Kune zvimwe zvakawanda. Chaicho:
Izvo zvinobatsira iwe kuvaka kuvimba. Unoda munhu anoshanyira webhusaiti yako kuti anzwe kugadzikana, uye kuvimba kuti, kana vakubvunza chimwe chinhu, ivo vachachigamuchira uye hauchengete mari yavo.
Iwe unoshandura vashandisi kuva vatengi. Ndicho chinonyanya kuzivikanwa chinangwa uye kushandiswa kwezvitoro zvekutengesa.
Iwe unowedzera kuwedzera. Nekuve nechirongwa chevashandisi kuve vatengi, uchivakwezva uye uchivapa chimwe chinhu chinoita kuti vasarudze bhizinesi rako, iwe uchawedzera kutengesa kwako uye, pamwe nako, kubhadhara kwako.
Zvikamu zveiyo fanera yekutengesa
Tisati takuudza iwe kuti iyo fanera yekutengesa inoumbwa nenhevedzano yezvikamu izvo zvakanaka kuti uzive. Izvi kunyanya ndizvo zvinotevera:
Kubata. Ndiyo chikamu chekutanga, iyo nguva iyo mushandisi paanoziva iyo peji rewebhu, kungave nekushambadzira, kana neinjini dzekutsvaga, kurudziro, nezvimwe. Hechino chikonzero chekutenga, asi kwete kutsunga kutenga pane yako webhusaiti asi tanga kutarisa kuti uone kana uchizvibvumikisa.
Shizha. Kana mushandisi iyeye otanga kufunga nezve kutenga chigadzirwa, anopinda nhanho iyi, nekuti mushandisi akabatwa uye ndepaya paano funga kuti anofanira kutenga chigadzirwa muchitoro chako here kana kuti kwete.
Mukana. Mushandisi anofarira zvigadzirwa zvaunotengesa, uye anotokurudzirwa kuzviisa mungoro yekutengera kuti ubate. Asi haasati atora nhanho.
Kufanirwa. Zvichienderana nezvido zvine mushandisi, mazano ezvimwe zvigadzirwa zvinogona kuve zvinomufadza zvinopihwa.
Kuvhara. Ndicho chikamu chekupedzisira, umo mushandisi anova mutengi nekuti anoteedzera nhanho dzese kudzamara odhiyo yapera.
Bhenefiti yeiyo yekutengesa fanera mune rako bhizinesi
Kunyangwe iwe uine bhizinesi diki kana kambani hombe, chinangwa chako ndechekutengesa kune vatengi. Zvigadzirwa kana masevhisi. Asi pane izvi iwe unofanirwa kuve nehurongwa hwekuti munhu wese anouya kukambani yako kana bhizinesi repamhepo atenge kubva kwauri.
Ndipo panopinda zvitoro zvekutengesa. Asi iwe haungowana izvi. Pane mazhinji akawanda mabhenefiti aunofanira kuziva Sezvo:
Ziva izvo zvinotarisirwa nevatengi vako. Mune mamwe mazwi, nyatsonzwisisa zvavari kutsvaga, zvavanoda uye nezvavanoona zvisina kunaka. Izvi zvinoitwa kuburikidza nemahunhu akasarudzika.
Vandudza kugadzirwa. Nekuti nekutarisa pane zvinoshanda, urikudzivirira kutambisa nguva.
Ratidza yekutengesa vhoriyamu. Sezvo fanera yekutengesa ichikubvumidza iwe kuti uzive kuti vangani vashandisi vanoenda kubva kwekutanga kusvika kuchikamu chekupedzisira, uye gadzira akasiyana magadziriso mune yega yega kugadzirisa mhedzisiro.
Maitiro ekugadzira fanera yekutengesa kune yako eCommerce
Sezvawakamboona kumberi, fanera yekutengesa inoumbwa nezvikamu zvinoverengeka, uye izvi ndezve izvo zvekare zvinokuudza maitiro ekuita imwe. Kazhinji, iwe unofanirwa kuchengeta mupfungwa.
Ndiyo chikamu chinoenda vanhu vazhinji. Naizvozvo, iwe unofanirwa kufunga nezve chimiro chevashandisi vanogona kufarira. Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe unoda kutengesa iyo depilatory kirimu. Chinhu chakasarudzika ndechekuti iwe uratidze nekushambadzira kuti vanhu vese vazvizive. Asi pachagara paine vateereri chaivo, sevakadzi vane vhudzi rakawanda, kana varume vanoda kutarisira chitarisiko chavo.
Chinangwa chako apa ndechekutsvaga chii chinodiwa nevanhu kuti vakwanise kurwisa kunze uko. Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kutsvaga izvo izvo zvinodiwa nevanhu kuti ubudise meseji inovataurira kuti unogona kuzvigadzirisa.
Kune izvi, maturusi akadai seSEO kumisikidza, zvemukati kushambadzira, Yemagariro midhiya kushambadzira, kushambadzira ... ichave ako akanyanya kubatana.
Chikamu chechipiri cheiyo yekutengesa fanera inouya kwatiri sechibvumirano, chikamu umo vashandisi vanouya pawebhu asi isu hativazive. Saka isu tinofanira kuvapa chimwe chinhu kuvakurudzira kuti vasiye yavo data nesimba vape zvigadzirwa zvichibva pane zvavanofarira.
Zvishandiso? Zvakanaka, mapeji ekumhara, mafomu, kunyorera ...
Ivo vanoenda kuchikamu chino vatove kusangana newe, zvinoreva kuti izvozvi unogona tumira ivo ruzivo rwemunhu kuvabatsira kusarudza chitoro chako uye kwete chevamwe.
Mune ino kesi iwe unofanirwa kugadzirisa hukama hwako nemushandisi, kungave mukutumira tsamba (inova inonyanya kushanda uye pari zvino isinganyanye kukuvadza) kana kuburikidza nedzimwe nzira dzakadai sekushanya kushanya kwavo pawebhu (nezano rezvigadzirwa zvemunhu).
Uye mune zvimwe zvikamu?
Vamwe vese vanovimba zvakanyanya nevashandisi pane iwe pachako, kunze kwekuvaka webhusaiti iri intuitive, zviri nyore kuita maitiro ekutengesa, uye nekukurumidza.
Zviri kujekesa kwauri kuti chii fanera yekutengesa uye ndeyei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Yekutengesa fanera: Chii icho uye ndeyei?
Nguva uye sei yekuzivisa mari yakawanikwa paInternet